Hiran State - News: Dowlada Shiikh Shariif ma dowlad Somaliyeed baa mise waa maamul goboleed?
Dowlada Shiikh Shariif ma dowlad Somaliyeed baa mise waa maamul goboleed?
Somalia:- Dalka Somaliya iyo shacabkiisuba waxey soo mareen marxalado kala duwan. waxii ka danbeyey dagaaladii sokeeye wadankii waxuu u gacan galay kacdoon lagu qasaaray oo ay hor boodayeen kooxdii USC oo u muuqaal ekeyd koox fowdo oo kaliya ku dagaal galeen haba yaraatee wax qorshe fog iyo mid soke oo u diyaar sanaa aysan jirin. waa laga yaabaa ragii dhisay USC iney qorshe iyo nidaam ay wadanka ku horumariyaan sameeyeen laakinse aan qorshahaasi ilaa maanta meel uu maray qoraal iyo ficilba la helin, marka USC xitaa halkankoodii in taariikhda Somaliya marka lag ahadlayo lagu soo darsado maba mudna oo laga hadlo amaba magacooda xitaa la xuso iyaga waanu ka soconeynaa.
Hadaan u soo laabto dulucda qormadani waxii ka danbeeyey bur burkii koofurta Somaliya markasta waxaa ka hirgalayey dowlado kumeel gaar ah oo qofka hogaminayo og yahay waqtiga uu joogayo iyo waqtiga uu baxayo. nasiib wanaag dowladahii soo maray wadanka xiligii bur burka midkastaba waxey laheyd cilad iyo nidaam soo dedejinayey iney bur burto laakinse kuwaasi waxaa loogu yeeri jiray TFG sida mida hada jirtaba loogu yeero.
Hadaba waxii ka danbeyey xukumadii Cumar Cabdirashiid maxaa is bedelay oo aysan dadku fahamsaneyn.waxaa isbedelay dowlad meelkasta oo shir laga iclaamiyo xitaa hadii meeshaasi lagu iibinayo Calanka Somaliyeed iyadu diyaar u ah iney ka qeyb gasho.dowladani waxey dowladahii ka horeyey kaka duwan tahay waxaa hogaaminayo madaxweyne Shariif oo caadifad iyo cunug yar oo school uu macalin ka ahaa inta laga afduubay xanaaqii uu ka xanaaqay qoraygii uu maalintaasi qaaday ku noqday madaxwyne Somaliyeed . iyaduba waa taariikh in la qoro u baahan waqtigeeda. sidoo kale dowlada hada jirta waxa R/wasaare ka ah Rarmaajo oo ay wadanka ugu danbeysay mar hore oo wax kaleba iska daaye isagoo aqoonyahan ah isaga iyo madaxweynaha Somaliya ay isla raacaan hal diyaarad. waa yaabe ma iyagaa is bahdilay Farmaajo iyo Madaxweynaha mise hanaanka dowladnimo iyo karaamada shacabka Somaliyeed oo ay metelaan ayey meel uga dhaceen?
Hadaba waxaad isweydiisaa waxa halkii sano ee ay codsadeen madaxweynaha iyo xukumada Farmaajo ka hortaagan in loogu daro yaase ugu darayo oo lag asugayaa diidmo iyo ogolaansho ma Somali mise QM,Yurub,America? waxaad isweydiisaa waxa dowlada hada jirta xumaan iyo samaanba looga taageerayo qeybo ka mid ah Mogdisho oo kaliya oo wadanka intiisa kale looga taageri waayey maadaama ay wasiiro ka yahiin qabiilada Somaliyeed oo dhan 4.5 maxey degaanada ay ka soo jeedeen ugu gadi waayeen hanaanka dowladnimo ama u gaarsiin waayeen? maxey dadku halkii ay dowlada dhiiragalin lahaayeen ugu mashquulsan yahiin sidii ay maamulo u gaar ah u sameysan lahaayeen?
Waxaad isweydiisaa ujeedadii ka danbeysay shirkii dhawr bilood ka hor lagu qabtay magaalada London oo ay isku soo hor fadhiisteen Puntland, Somaliland iyo wafi ka socday dowlada? sow lama socotaan in dhawantaan diyaarad kasta oo hawada Somaliya dul marta dhaqaalahii laga qaado loo kala qeybin doono Somaliiland, Puntland iyo dowlada Somaliya oo hada meelo badan oo dunida ka mid ah loogu yeero dowlada Mogdisho amaba koofurta Somaliya, halkii laga dhihi lahaa dowlada Somaliya.
Waxaad dib u eegtaa sida shirarka caalamiga ah loogu soo dhaweynayo waxii ka danbeyey shirkii London masuuliyiinta Puntland iyo Somaliland oo waliba goob joog ka ah shirarka looga hadlayo arimaha Somaliya. waxaad daawataa shirkii Kampala yaad is dhihi laheyd amaba aad dhihi laheyd Shiikh Shariif iyo Faroole waa madaxweyne Somaliyeed? hadii ay Puntland tahay dowlad goboleed maxaa loo fadhiisin waayey madaxweynaha Somaliya gadaashiisa kedibna ay fikirkooda u dhiiban wayeen halka uu safka hore fadhiyey, aduunyada wey taqaanaa dowladnimadu waxey tahay laakinse madaxweynaha iyo xukumada Farmaajo ayaa la tusinayaa ineysan waxbo aheyn, marka halkii laga dhihi lahaa waxaad tahiin ma jirto waa loo sarbeebayaa shirarka aad maqleysaan waxaa la dareensiinayaa inesan waxbo ahey.
Madaxweyne Somaliyeed ayaan ahey hadane waxaanu isku darajo nahay madaxweyne maamul goboleed shir waliba caalami ah oo ay aduunyadii fadhiso hadane hal sano in leygu daro ayaan Mahiga weydiisanayaa wadanka aan madaxweynaha amaba R/wasaaraha ka aheyna waa Somaliya, hadalkaas bal Somaliyey is waafajiya ayuu yiri Xaaji Nuur oo la yaaban sida qarankii Somaliyeed wiilal an waaya arag aheyn ugu tumanayaan waa sidey isaga la tahaye.
Qab qablayaashii dagaalka Somaliya iyagu ceebtooda iyo dhibtooda waxey lajoogeen gudaha wadanka laakinse kuwani aduunyadii ayey tusinayaan ineysan Somali waxbo is dhaamin aqoonyahankooda, wadaadkooda iyo waliba siyaasiyiintooda.Marka Somaliyey dowlada Shiikh shariif iyo Farmaajo horboodayaan ma dowlad qaranbaa mise waa dowlad goboleed?
Somaliland iyo Puntland wey u qalmaan waxkasta oo mashaariic amaba dhaqaalo ah oo la siin lahaa TFGda in iyaga loo weeciyo maadama ay gacantooda ku jirto waxii ugu muhimsaa nolosha bini'aadamka oo ah nabadgalyo halka kuwa raadiska ugu jiro in sanad loogu daro ay goobahii ay joogeen shacabkii darxumo ugu dhamanayaan oo aysan kala jecleyn.
I hope dhacdooyinkaan iyo siyaasadan qalafsan ee ay ku dhiranayaan xukumada hada jirto ineysan ku dhaqmin kuwa mustaqbalka hogaamin doona shacabka Somaliyeed ee u tartami doona doorashada soo socta ee laguwado iney wadanka ka dhacdo bisha 8aad waxii ka horeeya.
· admin on June 05 2011 12:33:25 · 0 Comments · 1997 Reads ·
14,579,355 unique visits